Ma tahay Ma noqon kartaa? APUI kii ugu horreeyay ayaa halkan jooga ... | Martech Zone
Ma tahay Ma noqon kartaa? APUI kii ugu horeeyey waa kan here
Khamiista, Febraayo 8, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
The APUI (Isdhaxgalka Isticmaalka Barnaamijyada Barnaamijyada) ayaa laga yaabaa inuu halkaan joogo. Waxaan isha ku hayaa Yahoo! Dhuumaha, matoor ay isticmaaleyaashu ku shaandheyn karaan oo ku maareyn karaan RSS cunto siiya.
Kani waa bilowga, in kastoo, oo wuxuu noqon doonaa mid xiiso leh in la daawado. Waxaan ka hadlay baahida loo qabo tan technology dabayaaqadii sanadkii hore iyo saadaaliyay in 2007 uu noqon lahaa sanadkii GUI isdhexgalka isdhexgalka oo runti waxaan aaminsanahay in sanadkaan uu yahay sanad kala tag.
Haddii Yahoo! Dhuumaha ayaa loo isticmaali karaa in lagu maareeyo RSS, waa tallaabo gaaban oo looga gudbo RSS loona wareejiyo mid kale XML API iyo Adeegyada Webka. Waxaan ku kalsoonahay in isdhaafsigyadan ay noqon doonaan kuwo si layaableh u xoog badan sanadaha soo socda in baahida loo qabo horumariyayaashu ay bilaabi karaan inay hoos u dhacaan.
Weli waxaa jira shaqo badan oo la doonayo in la qabto could laakiin tani waxay kacdoon ku sameyn kartaa shabakadda oo runtiina waxay u qaadan kartaa codsiyada dhismaha heerka xiga. Barnaamijyada degdegga ahi waxay u rogi doonaan toddobaadyo, illaa saacado, illaa daqiiqado si ay u beddelaan xogta, u shaandheeyaan, una kiciyaan dhacdooyinka ku saleysan. Qiyaas inaad u fariisato sidii suuq ahaan oo aad si fudud 'socodka-shaxda' ololahaaga soo socda… u lahayn lambar qoris, kharash la'aan barnaamijyada, ma jiraan wax horumariyayaal, ma jiraan mashaariic miisaaniyaddoodu aad u badan tahay oo soo daahday.
Waa tan saadaashayda xigta… baahida loo qabo horumariyeyaasha softiweerku way sii kordheysaa sannadaha soo socda, suurta galnimada tobanka sano ee soo socota si kastaba ha noqotee, intaas kadib baahida loo qabo horumariyayaashu waxay bilaabi doonaan inay hoos u dhacaan maadaama dadku ay si fudud u adeegsadaan heerka shirkadda APUIs si ay u dhisaan barnaamijyadooda, shaqadooda, isdhexgalka, iyo farsamaynta xogta.
Tani waa mid xiiso leh!
Anatomy ee Musiibo
Kor u qaad buloogyada si aad u kobciso Darajadaada Bogga
Febraayo 10, 2007 saacadu markay tahay 1: 01 AM
Aragtida koowaad oo aad u kooban waa inay la mid tahay fikradda sida Demicron's Wirefusion ay u suuro geliso barnaamijyada java in la dhiso…
Ku rid "module" ku xir dadka kale, qeex cabirrada oo daabac.
Kaliya waxaan jeclaan lahaa in Demicron la soo baxo "silsilad" Wirefusion ah "oo hoos u dhigtay qaar ka mid ah taageerada 3d isla markaana kordhiyay qaar ka mid ah wax isdabamarinta sawirka 2d… laakiin taasi waa boosteejo ka duwan.
Febraayo 10, 2007 saacadu markay tahay 10: 57 AM
Halkaas ayaynu gaadhaynaa! Waxaan xasuustaa isticmaalka Xalalka Sagent dhawr sano ka hor waxayna ahayd ETL GUI oo qortay qorshooyinka XML. Waxay u kala barreen halkaas, oo leh jiidasho iyo hoos u dhac shaqeynaya. Waxaan ku qori karnaa qorshooyin saacado gudahood halkii toddobaadyo aan ku soo qaadan lahayn. Waxaan sugayay qof inuu 'webify' kani in muddo ahba.
Markii ay soo if baxeen Adeegyada Shabakadda, runtii waxaan la yaabanahay in qofna uusan dhisin GUI si uu u akhriyo WSDL oo aad uga faa’iideysan karto si aad u dhisto is-dhexgal khadka tooska ah ee internetka. Aad ayaan u faraxsanahay maxaa yeelay tani xaqiiqdii waxay u jirtaa 1 tallaabo. Waxaan rajeynayaa in Yahoo uu "dimoqoraadiyeeyo" Dhuumaha oo u oggolaado dhinacyada saddexaad inay dhisaan qaabab u gaar ah.
Anigu ma ihi nin reer Java ah, in kasta oo aan qortay qaar. Waxay u muuqdaan inay yihiin aqlabiyadda aamusan marka laga hadlayo horumarka. Maaddaama saameynta Sun ay sii kordheyso, waxaan rajeynayaa Java sidoo kale inuu sameeyo. .NET xaqiiqdii waxay ku daydeen qaar ka mid ah awoodaha waxaanan dareemayaa barnaamijyo kale oo si fudud Java u qaadanaya. Waxaa laga yaabaa inaan ku sameeyo xoogaa shaqooyin guriyeed ah Java. 🙂
Waan tagayaa Xadgudubka. Mahadsanid!